कोरोनाभाइरसले छोराको मृत्यु भएपछि रातभर रुँदै बसे परिवार, बिहान छोरा जिउँदै ! – Namaste Dainik
May 28, 2020 NamastedainikLeaveaComment on कोरोनाभाइरसले छोराको मृत्यु भएपछि रातभर रुँदै बसे परिवार, बिहान छोरा जिउँदै !
मृतक ती पिताका छोरा थिएनन् । त्यो शव अर्कै बिरामीको थियो । कोरोना संक्रमितको शव भएको कारणले शवको अन्तिम संस्कारको लागि त्यही किसिमको सुरक्षा उपायसहित व्यवस्था गरिएको थियो । शवलाई अग्नी दिने बेला पितालाई मृतकको शरीर देखेपछि केही शंका भयो । उनले शवको अनुहार हेरेपछि भने मृतक उनका छोरा नभएको पुष्टि भयो। शव अर्कै युवकको थियो जो केही समय पहिले मात्र मुम्बइबाट फर्केका थिए र उनी संक्रमित भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । दुवै युवकको एउटै अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो र दुईको बेड नजिकै थियो ।